Volana fanentanana momba ny autisme sy izay ataon'ny Qatar Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Volana fanentanana momba ny autisme sy izay ataon'ny Qatar Airways
Fizahan-tany azo idirana • Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Qatar • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Qatar Airways androany dia nanambara andiana hetsika sy hetsika manokana hatao mandritra ny volana aprily ho ampahany amin'ny Volana fanentanana momba ny autisme. Qatar Airways dia manohy ny fahombiazany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Hamad Medical Cooperation (HMC) mandritra ny taona faharoa misesy amin'ny fampiantranoana fandaharan'asa mandritra ny volana natao hanentanana ny fahatsiarovan-tena momba ny aretin-koditra autisme.
Ny fandaharan'asa amin'ity taona ity dia hisy seminera maromaro sy fiofanana notarihin'ny dokotera, manam-pahaizana ary mpitsabo ny HMC, miaraka amin'ny tanjona mba hiantohana ny ekipan'ny Qatar Airways sy ny mpiasa ao an-toerana hanohana ireo mpandeha autist miaraka amin'ny fahatakaran'izy ireo tsara kokoa ilay aretina.
Ny dokotera sy ny mpitsabo HMC dia hitarika sy hanome torohevitra an'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa momba ny fomba hanohanana sy hanampiana ireo mpandeha autiste rehefa mandeha amin'ny sidina Qatar Airways. Nisy kioska fampahalalana koa napetraka ao amin'ny foibem-pikatrohana Qatar Airways izay hizaran'ny solontenan'ny mpitsabo avy amin'ny HMC bokikely fampahalalana momba ilay aretina.
Andro manerantany amin'ny 2 aprily manerantany ny Andro manerantany manerantany momba ny autisme, miaraka amin'ny tanjona ny hanintona ny sain'ny autisme. Ho fanamarihana ny andro, ny kaompaniam-pirenena dia hampiantrano Andro Ankafizin'ny Ankizy mahafinaritra sy mavitrika ao Kidzmondo Doha, izay hananan'ny mpanamory fiaramanidina sy ny ekipan'izy ireo trano hifaneraserana amin'ireo ankizy manana autisme sy ny ray aman-drenin'izy ireo.
Ho fanampin'izany, ho fanohanana ny Andro manerantany momba ny fananahana, ny mpiasan'ny Qatar Airway manerana ny tambajotram-pitaterana an'habakabaka dia hitafy akanjo manga - ny loko ofisialin'ny volana fanentanana ny aotisma - ary handefa hafatra momba ny fomba hitondran'izy ireo anjara amin'ny fampahafantarana ny mpiara-monina. Mandritra ity volana ity dia hitsidika ny Renad Academy, mpikambana ao amin'ny Qatar Foundation, ny mpiasan'ny Qatar Airways sy ny ekipan'ny kabinetrany, handany andro iray miaraka amin'ireo ankizy manana autisme.
Manomboka amin'ny 1 aprily 2018, ny fotoam-pampiofanana ao an-trano momba ny fanentanana momba ny autisme izay nataon'ny mpanazatra Qatar Airways First Aid dia homena ny mpikambana ao amin'ny sambo rehetra ao anatin'ny fiofanana miverimberina.
Ny filoha lefitra misahana ny zon'olombelona Qatar Airways, Ramatoa Nabeela Fakhri, dia nilaza fa: "Qatar Airways dia mpanohana lehibe hatrany amin'ny asa sosialy sy maha-olombelona. Amin'ny alàlan'ny fampitaovana ireo mpiasa ao amin'ny kabininay sy ireo mpiasan'ny serivisy an-tanety amin'ny fahatakarana sy fahatsiarovan-tena bebe kokoa momba ilay aretina, dia manampy izahay hiantoka fa manohana ny mpandeha rehetra izahay arak'izay tratranay. Faly izahay fa handray anjara amin'ity fandraisana andraikitra manerantany amin'ny sehatra eo an-toerana amin'ny fiaraha-miasa indray amin'ny Hamad Medical Corporation hanome ity hafatra fampahafantarana sy fiofanana lehibe ho an'ny mpiasanay ity. Ny seminera tarihan'ireo manam-pahaizana efa voaofana dia hamela anay hiantoka làlana tsara sy mahafinaritra, na ho an'ireo mpandeha autiste na ho an'ireo mpikarakara azy ireo. ”
Hisy fanentanana manokana amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny sehatry ny haino aman-jery sosialy Qatar Airways miaraka amin'ny diezy # qatarairways # autismawciousmonth, hanomezana fanampiana sy hampitomboana ny fahatsiarovan-tena. Nikarakara fakana sary ihany koa ny zotram-piaramanidina niaraka tamin'ny mpiasan'ny tranony, ahafahany mamoaka atiny mifandraika amin'ny autisme manerana ireo fantsona media sosialy malaza an'ny zotram-piaramanidina, manampy amin'ny fampitomboana bebe kokoa ny fahatsiarovan-tena manerantany.
Ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy dia ampahany lehibe amin'ny soatoavin'ny Qatar Airways. Tamin'ny taon-dasa dia nanavao ny fanohananany ny Airline Partner ho an'ny Orbis UK mandritra ny telo taona. Ilay zotram-piaramanidina dia mpanohana be orina an'ny Orbis sy ireo programa fisorohana ny fahajambany nanomboka ny taona 2012. Ny Qatar Airways dia manohana hatrany ny programa Educate-A-Child, izay manampy amin'ny fampianarana an-tsekoly voalohany ho an'ny ankizy an-tsekoly an-tapitrisany iraisam-pirenena.
Ho fanampin'izay, ny zotram-piaramanidina dia niara-niasa tamin'ny Doha's Shafallah Center, fikambanan'ny filàna manokana any Qatar, hanomezana olon-dehibe mila tombontsoa manokana asa any Qatar Airways.
Ary koa tamin'ny nifidianan'ireo mpandeha eran'izao tontolo izao an'i Skytrax 'Airline of the Year', dia nahazo valisoa loka lehibe hafa koa ny mpitondram-pirenen'i Qatar tamin'ny lanonana tamin'ny taon-dasa, anisan'izany ny «Airline tsara indrindra any Moyen Orient», "Orinasa tsara indrindra eran-tany Toeram-piaramanidina voalohany sy tsara indrindra eran-tany ''.
Qatar Airways dia miasa amina fiaramanidina maoderina maherin'ny 200 mankany amin'ny tamba-jotra misy tanjona lehibe eo amin'ny sehatry ny asa sy fialamboly mihoatra ny 150 manerana ny kaontinanta enina. Ny zotram-pitaterana dia manomana tanjona vaovao mahaliana amin'ny taona 2018/19, ao anatin'izany i London Gatwick sy Cardiff, United Kingdom; Lisbon, Portugal; Tallinn, Estonia; Valletta, Malta; Cebu sy Davao, Filipina; Langkawi, Malezia; Da Nang, Vietnam; Bodrum, Antalya ary Hatay, Torkia; Mykonos, Greece and Málaga, Spain.